Warbixin: Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo safar qarsoodi ku joogo magaalada Hargeysa | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Warbixin: Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo safar qarsoodi ku joogo magaalada Hargeysa
Warbixin: Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo safar qarsoodi ku joogo magaalada Hargeysa
Xorriya Online: Safiirka dalka Shiinaha ee Soomaaliya, Qin Jian ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland si uu ula kulmo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Somaliland ayaa ku soo dhaweeyey safiirka garoonka diyaaradaha ee Cigaal, kuwaas oo u sii gudbiyey madaxtooyada si uu kulan ula yeesho madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Safarka danjiraha oo ahaa mid qarsoodi ayaa imaanayo kadib xiriir diblimaasi iyo mid iskaashi oo ay sameysteen Somaliland iyo Taiwan.
Taiwan iyo Somaliland ayaa sheegay in ay isdhaafsan doonaan wakiilo matalo labada maamul iyo in ay iska kaashan doonaan dhanka caafimaadka, waxbarashada, beelaha, kalluumeysiga iyo teknoolajiyadda.
Madaxda Shiinaha ayaa si adag uga hor yimid xiriirka labadaasi dhinac ay sameysteen, isagoona ku tilmaamay wax aan la aqbali kareyn, isla markaana xad gudub ku ah midnimada iyo qarannimada Jamhuuriyada Shiinaha.
Ilo xog ogaal ayaa Xorriya Online u xaqiijiyey in safiirka uu doonayo in uu gaarsiiyo mowqifka dowladda Shiinaha ee ku aadan xiriirka ay sameysteen Somaliland iyo Taiwan.
Shiinaha ayaa ku arko jasiiradda Taiwan gobol iyo qeyb ka mid ah Shiinaha oo aanan xiriir toos ah iyo mid dadban aan sameysan karin iyo oo laga talo iyo oggolaansho laga heysan madaxda Shiinaha. Balse, Taiwan ayaa aaminsan in ay tahay dal ka madax bannaan Shiinaha. Caalamka uma aqoonsano Taiwan dal madax bannaan, waxaadna mooda in muddooyinkii dambe ay soo yaraanayaan dalalka iyo ururada sida tooska ula macaamilo.
Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa xiriirka Somaliland iyo Taiwan ku tilmaamday mid aan sharci aheyn oo khlilaafsan qawaaniinta caalamiga ah. Waxay sheegay Soomaaliya in aysan marnaba raali ka noqon doonin waxkasto oo midnimada iyo qarannimada dalkeeda waxyeelo gaarsiinayo.
Somaliland ayaa isku aragto dal ka madax bannaan Soomaaliya oo cidda ay rabto xiriir iyo iskaashi la sameysan karto. Ma jiro dal iyo urur caalami ah oo Somaliland ula macaamilo dal madax bannaan.
Safarka Jian ee Hargeysa ayaa qeyb ka noqonaya dadaalada uu Shiinaha ku doonayo in uu ku wiiqo iskaashiga Taiwan iyo Somaliland.
Wixii ku soo kordho kala soco Xorriya.com